Dagaallo lagu jabiyey ciidamada cadowga Itoobiya.
Gawaadhi uuraalo ah oo laga gubay cadowga Itoobiya.
Wariyaha RX uga soo warrama furinta dagaalka ee Ogadeenya ayaa noo soo sheegay dagaallo dhawr ah oo dhex maray CWXO iyo kuwa gumaysiga Itoobiya, kuwaasoo lagu jabiyay ciidammada maxaysatada ah ee Itoobiya. Dagaalladaasi waxay u dheceen sidatan;
10/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kuwa cadowga ee ku sugan Higlaley, waxaa loogu gaystay khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
13/07/07 weerar mir ah oo CWXO ay ku qaadeen kuwa cadowga ka tirsan oo ku sugan Cobolle, waxay ugu gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
09/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kuwa gumaysiga Itoobiya ka tirsan oo hawlgal u yimid meesha lagu magacaabo Shan-dhoorre, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxay ugu gaysteen khasaare ba�an oon faahfaahintiisa la haynin.
18/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kuwa cadowga ee fadhigoodu yahay magaalada Shilaabo waxay ugu gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin.
07/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kuwa cadowga ee ku sugan degmada Sagag, waxay cadowga kaga dileen 8 askari, waxay sidoo kale kaga dhaawaceen 5 kale.
13/07/07 waxaa sidoo kale cadowga Sagag lagaga dilay 14 askari, ka dib markii weerar mir ah lagu qaaday, waxaa kaloo lagaga dhaawacay 18 askari.
18/07/07 dagaal dagaal CWXO iyo kuwa cadowga ku dhex maray Nus-dariiqa, waxaa cidammada cadowga lagaga dilay 4 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 7 kale.
18/07/07 dagaal sidoo kale ka dhacay Tuula-canbaar, oo Nus-dariiqa ka tirsan, waxaa cadowga lagaga dilay 2 askari, 3 kalana waa lagaga dhaawacay.
05/07/07 weerar mir ah oo CWXO ku qaadeen kuwa cadowga ee ku sugan degmada Gunagado, waxay ugu gaysteen khasaare aan faahfaahintiisa la haynin. Isla degmada Gunagado ciidammada cadowga ee ku sugan ayaa weerar mir ah lagu qaaday markii ay taariikhdu ahayd 07/07/07, waxaana loo gaystay khasaare ba�an.
14/07/07 CWXO ayaa hal baabuur oo Uuraal ah ciidammada cadowga kaga gubay Hal-gariga, oo Garigo�an iyo Garbo u dhaxaysa, waxaana cadowga halkaas kaga dhintay in k abadan 60 askari oo baabuurkaas saarnaa.
Isla 14/07/07 waxaa ciidammada cadowga sidoo kale hal baabuur oo Uuraal ah lagaga gubay Heelle-dheere, oo degmada Garbo k a tirsan, waxaana cadowga halkaas kaga dhintay ilaa iyo 60 askari oo baabuurkaas saarnaa.
16/07/07 CWXO ayaa baabuur Uuraal ah cadowga kaga gubay Laas-galool, oo Dhagaxbuur ka tirsan, waxaana cadowga falkaas kaga dhintay 60 askari.
Xildhibaan Jamaal Daahir Khaliif oo kamid ah baarlamaanka federaalka ee Gumaysiga itoobiya kana soo baxa degmada Galaadi oo baarlamaanka ka goostay magangalyo siyaasadeedna weydiistay wadanka Jarmalka(Waraysi dheer oo xiiso leh oo maqal ah ka dhagayso Radio Xoriyo).
Faafin: SomaliTalk.com | July 22, 2007